Amashishini amancinci Ukusetyenziswa kweMidiya yoLuntu kunye neziphumo Martech Zone
Amashishini amaNcinci aSebenzisa iiMidiya zoSetyenziso kunye neziphumo
NgoLwesihlanu, Septemba 30, 2011 NgoLwesithathu, Oktobha 26, 2011 Douglas Karr
IsihlweleSPRING sipapashe le infographic kwimikhwa yamashishini amajelo amancinci eendaba ezentlalo. Ukuqala kwam ukubona izibalo ekusetyenzisweni, ndaye ndothuswa yindlela izibalo zokusebenzisa eziphantsi ezishishini elincinci. Thatha ujongo olunzulu kwaye ndicinga ukuba ayothusi, nangona kunjalo. Sisibonelelo esomeleleyo ukuqhuba ishishini elincinci eliphumelelayo ukuze kugcinwe ubukho beendaba zosasazo kunokuba ngumceli mngeni.
Oko kwathethi- lithuba elingenambeko kwabanye abantu abaqhuba ishishini elincinci. Ibonisa ukuba akukho khuphiswano ngaphandle phaya! Qala ibhlog kwaye ube nemarike yakho. Zibandakanye kwimidiya yoluntu kwaye wakhe abaphulaphuli bakho. Ayizukujika ishishini lakho ngobusuku obunye, kodwa lutyalomali oluza kuhlawula. Kungathatha iiveki, kunokuthatha iinyanga… kodwa kufuneka ubandakanyeke. Ukuba awukwenzi oko, abo ukhuphisana nabo baya kuthi.
Imveliso yeCrowdsourced kunye noyilo loMzobo ngabantuSPRING
Indlela yokubhukisha amaphepha kunye nokuwafunda kamva
Ukunyuka kweNtengiso yeFowuni
Sep 30, 2011 ngo-5: 58 PM
Oku ngokuqinisekileyo kunolwazi olunomdla… Olunye uzibalo nangona, kum, lubonakala ngathi alunamtsalane ngumthetho wokuba i-51% yabasebenzisi be-facebook kunokwenzeka ukuba bathenge iimveliso zeempawu abazilandelayo okanye abalandeli babo.
Ngokwenene? Ama-51% kuphela? Ukuba sicinga ukuba abanye abakhathali, ayilunganga loo nto. Kodwa kuya kuthini ukuba sithatha ukuba abanye basenokwenzeka ukuba BANGAPHANTSI kwiimveliso? Ayililo inani elilungileyo ngelo xesha.
Ndingacinga ukuba kuya kuba phezulu, kuba uninzi lwabantu luya kuba nakho ukulandela iimveliso esele bezithanda. Kwimeko apho, ngaba lo mgaqo uthetha nto kwaphela? Ulandela ii-brand ekunokwenzeka ukuba uthenge kuzo, ngokucacileyo. Ke ithini imvelaphi yale nto? Ngaba kunokwenzeka ngakumbi ukuba bathenge njengesiphumo esithe ngqo sokuba ngaba fan kwi-facebook ngokukodwa? Ukuba kunjalo, oko kuya kuthetha into ethile.
Kodwa andicingi ukuba iyakubakho indlela yokulinganisa oko. Ke ngoku, njengoko ime, andicingi ukuba nabani na kufuneka afunde kakhulu kule nombolo.
Mar 26, 2012 ngo-4: 39 AM
Ngokuqinisekileyo le inolwazi olunomdla